राज्यको क्षमता उपयोग गरौं
क्यान्सर जस्तो ज्यानलेवा रोगको उपचार नेपालमै सम्भव छ भन्ने सुखद विवरण आएको छ । केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा क्यान्सरको उपचार सम्भव छैन भन्निथ्यो तर अहिले त्यस्तो अवस्था रहेन । तर यो कुरालाइ सर्वसाधारणले अझै विशवास गरेको अवस्था छैन वाध्यतावस बाहेक । कारण हो ठूला नेताहरु यो रोग लाग्ना साथ विदेशमा उपचार गर्न जानु । जोसंग साधन स्रोत छैन तिनीहरुमात्रै स्वदेशमा उपचाररत रहेको पाइन्छ ।
स्थानीय तहमा गएका सहकारीले के गर्लान ?
स्थानीयतहमा चुनाव भएर निकाय खडा भएका लामो समय पछि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारीहरू हस्तान्तरणको काम सुरु भएको छ । यी निकाय केन्द्रमातहतमा रहदाका अनुभव सकारात्मक छैनन ।
प्रदेशमा कर्मचरी व्यवस्थापनको कुरा
केन्द्र हुन कि प्रदेश वा स्थानीय तह तिनले सेवा दिने भनेका कर्मचारी मार्फत हुन । अहिले सममको अनुभव के रह्या भने गठन भउका दुइ तह प्रदेश र स्थानीयतहमा कमृचारकिो व्यापक अभाव देखियो । यसले स्थानीयतहमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ भने प्रदेशले पनि यही विडम्वना भलेल्नु पर्ने भएको छ ।
जोखिमयुुक्त घरजग्गामा फेरि किन धेरै कर्जा ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको एक तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले घरजग्गा र व्यक्तिगत आवासमा मात्र झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको कर्जा तथा लगानीसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विस्तृत प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले उक्त परिमाणमा कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् ।
रकम पीडितका शयर हाकिमको
२०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित बनेका अधिकांश जनता अझै घरबारविहीन अवस्थामै छन् । उनका टहरावास प्रत्येक हिउद वर्षमा यथावत नै छ । उनको खलबलिएको जिवनलाइ सहजता दिन भनी सरकारले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण गठन ग¥यो ।
प्रदेश सरकारबाट सुशासन प्रारम्भ होस्
सुशासनका जति कुरा गरे पनि त्यो हुन सकेको छैन । झन् पछिल्ला दिन भ्रष्टाचार बढ्दै नै गएको पाइन्छ । दलका घोषणा पत्रमा ठूला कुरा लेखिन्छ, शून्य सहनशीलता भनिन्छ तर गरिन्छ उल्टो । यस्तो बेला देशमा एउटा नयाँ व्यवस्था प्रारम्भ भएको छ प्रदेश सरकारको । त्यसले चाहिँ वास्तवमा नै सुशासनको नमुना देखाओस्
देश कालो धन थुपार्ने केन्द्र नबनोस्
निकट सयमै सत्तारोहण र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा सम्भावित दाबेदारले कालो धनलाई सेतो बनाएर व्यवसायमा लगाउन दिने र त्यसबाट देशले समृद्धि गर्ने भनी सार्वजनिकरुपमा नै बताइएको कुरा सामान्यरुपले लिनु हँुदैन । यो भनाइ सार्वजनिक हुँदाको समय संयोग पनि त्यस्तै परेको अवस्था छ । यसै दिन स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार करोडभन्दा बढी बिगो दाबी गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेकै दिन यो कुरा आयो । यदि यो मान्यता स्थापित भयो भने नेपाल संसारभरिकै लागि कालो धनको केन्द्र बन्ने खतरा आउँछ जो देशकै लागि आपत्तिको विषय हो ।
मान्छे चिसोले मर्छ कि भोकले ?
यो वर्षको चिसोले मधेसका २२ जिल्लामा आतंक नै मच्चायो । पहाड पनि अछुतो रहेन । चिसोकै कारण उब्जिएको भनिएको भाइरलले पहाडमा आधा सयको ज्यान गयो । भूकम्प र बाढीपीडित यसबाट धेरै प्रभावित भए । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार तराईका सप्तरी, सिरहा र रौतहटमा गरी ४८ जनाले ज्यान गुमाए । यसपटक समेत गरी बितेका केही वर्षयता चिसोबाट आउने मानिएको शीतलहरबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ११६ पुगेको छ भने पहाडमा भाइरल प्रकोपबाट पाँच सयको ज्यान गएको छ यो वर्षभित्रमा । पछिल्लोपटक सरकारले शीतलहरको मारमा परेकालाई दुई करोड २२ लाख रुपैयाँबराबरको राहत वितरण गर्ने निर्णय ग¥या तर यसले कुनै रोकथाम भएन । चिसोबाट मान्छेको ज्यान जाने थियो भने यसपटकलाई नै उदाहरण मानौं, मनाङमा सबैभन्दा बढी मान्छे मरेका हुने थिए । यो जिल्लामा माइनस १६ सम्मको तापक्रम रहेको थियो हप्ता दिनसम्म तर यता भनिँदै आइएको छ– चिसोले मान्छे मरे ।
राम्रो काम नराम्रो काम छोप्ने ढाल नबनोेस्
यो शीर्षकभन्दा भिन्न देखिँदै छ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको काम । यतिबेला उनले आफ्नो नेतृत्वमा लोडसेडिङ हटाएको एउटा राम्रो कामलाई त्यसपछिका धारावाहिक रुपले गरिएका नराम्रा कामलाई छोप्ने ढाल बनाए । यो अत्यन्त आपत्तिको कुरा हो ।
निर्माण सामग्री मूल्यमा हस्तक्षेप गर्ने बेला
हिउदको समय सार्वजनिक देखि नीजि तहका विकास निर्माणको काम अत्यधिक हुन्छ । तर यही बेला यसका आधारभुत बस्तुहरुको मूल्य अत्यधिक बढेको पाइयो । कारण केही छैन । केवल चुनावलाइ देखाएर यस्तोमूल्य बृद्धि भएको बुझन सकिन्छ । केही पहिले निर्माण व्यवसायीहरुले उत्पादकहरुले विनाकारण केवल अत्यधिक नाफा खानका लागि यस्तो मूल्य बढाइएको भन्ने विवरण सहत खुलासा गरेका थिए । तर त्यसको पनि सुनुवाइ भएन ।